မသက်ဇင်: ဒဂုန်တာရာ သို့ ကန်တော့ပန်း
ဒဂုန်တာရာ သို့ ကန်တော့ပန်း
၂၀၀၆ ခုနှစ်မေလ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် ကျရောက်ခဲ့သည့် ဆရာ ဒဂုန်တာရာ ၏ ၈၇ နှစ်ပြည့်မြောက်တွင် ပြည်ပ နိုင် ငံ အသီးသီး တွင် ရောက်နေကြ သော ကဗျာ စာပေချစ်သူ လူငယ် များ စုစည်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆရာ ဒဂုန်တာရာ သို့ အသီးသီး ဂါရဝပြု နှုတ်ခွန်း ဆက် ကန်တော့ ကြသည်။ ကျမ တို့ အားလုံး မိမိတို့ ရောက်ရှိ နေ ကြ သော နိုင်ငံ မှ တလှည့် စီ အချိန်ညှိ ကာ ဆရာနေထိုင်လျက် ရှိ သည့် ကလောမြို့ သို့ အလှည့်ကျ ဖုံးဖြင့် နှုတ် ဆက်ကြပါသည်။
ကျမ အလှည့် တွင် ဆရာဒဂုန်တာရာ ၏ ဆုံးမသြဝါဒ ကို ခံယူပြီး နောက် စိတ်ထဲ မှ ဆရာ့ အား ရည်စူး ကန်တော့ လျက် ဆရာ့ မွေးနေ့ပွဲ အတွက် ကျမ စပ်ထားသော ကဗျာတပုဒ် နှင့် ကန်တော့ ချင်ကြောင်း ပြောပြပြီး ကဗျာရွတ် ပြ ပါသည်။ ကျမ ကဗျာရွတ်ဆိုနေသည့် အချိန်တွင် ဆရာသည်ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်စွာ နားထောင်လျက်ရှိပြီး ကျမ ကဗျာရွတ်ခြင်း ဆုံးသွားသည့်တိုင် ဆရာ ငြိ်မ်သက်တိတ်ဆိတ်မြဲ ဖြစ်နေ သောကြောင့် ကျမ က ဆရာ ဆရာ ဆရာ ဟု သုံးကြိမ် တိတိ ဆက်တိုက် ခေါ်လိုက်သည့် အခါတွင် ဆရာ့တုန့် ပြန်ထူးသံကို ကျမ ကြားလိုက် ရပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ဆရာ့ အသံ အား ကျမ ခံစားမိလိုက်သည်။ ဆရာ့ အသံလှိုင်းသည် ကြေကွဲ ဆို့နင့်နေသည့် အသံ လှိုင်း ပါ လား။ ဆရာ မျက်ရည် ကျ မကျတော့ ကျမ မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆရာ့ရင်ထဲဝယ် ဆို့နင့်နေ သည် ကို တော့ ကျမ သိလိုက်ပါသည်။ ကျမ ကန်တော့ လိုက်သည့် ဆရာဒဂုန်တာရာ၏ ၈၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာလေး အား ခံစားရန် ကျမ မျှဝေ ပေးလိုက်ပါသည်။
ဒဂုန်တာရာ သို့ ကန်တော့ပန်း
ပြည်သူ ဘက် က ပါ တဲ့
ဆရာ ဒဂုန်တာရာ သြဝါဒ စကား
ကျမ ရဲ့ အသဲနှလုံးကြား မှာ
ထာဝရ သိမ်းထားလျက်ပါ ဆရာ
ဧရာဝတီ ယန်စီ ဗော်လဂါ
စောင်းကြိုး နှင့် ကတ္တီပါ ကားလိပ်
ဆိတ်ဖလူးရ နံ့ လေး သင်းသလိုထင်
ရင်သိမ့်ခုန် မှတ်ယူ ခဲ့ရပါတယ် ဆရာ
အောင်ဆန်း သို့ မဟုတ် အရိုင်း
ကိုဗဟိန်း သို့ မဟုတ် ကဗျာ
ရင်မှာငြိတွယ် ခဲ့ရပါတယ် ဆရာ
အနာဂတ်တွေ လှမ်းကြည့် လို့
ထင်းရူးနံ့ သင်းတဲ့ ရှမ်းမြေမြင့်မှာ
ရွှေ ရောင် ညနေခင်းရဲ့ 
လမ်းလျှောက် မြဲပဲပေါ့ နော် ဆရာ
ဆရာ ၈၇ နှစ်ပြည့်မှာ
ပြည်ပရောက် စာချစ်သူ တွေလေ
ဆရာ လိုချင် တမ်းတ တဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု
သစ္စာ ရှိသူတွေ စုစည်းလို့ 
တနေ့ဆရာ့ထံ
အသီးသီး ပြန် ရောက်လာ နိုင်မှာပါ ဆရာ။
Posted by မသက်ဇင် at 10:03 PM
ကျွန်တော်လည်း ဆရာ့ကို လေးစားအားကျရသူ တစ်ဦးပါပဲ။ အခုလို သတိတရ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
5:29 AM PDT
လေးစားပါတယ် မသက်ဇင် ။ကဗျာကလည်း ကောင်းတယ်၊
ထီးလှိုင်ရှင်ကဗျာလေးကို ကျွန်တော် အတော်ခိုက်တယ်ဗျ....
I love this POEMS and i can get so many news from myanmar.Thanks amillion for your hardworks dear. You are the best and I will always be in your website.
ယုံကြည်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်စုံပါစေ မသက်ဇင် ၊၊ အမြဲခင်မင်လေးစားနေလျက်ပါ ၊၊
ဒဂုန်တာရာ ကန်တော့ ပန်းကို လာဖတ်ပါတယ်
ကဗျာနှစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ပြီးရင် လွမ်းသလိုခံစားရပါတယ်အစ်မခင်မျာ
ဆရာ ဒဂုန်တာရာ ခဏတာငေးငိုင်မိတယ်ဆိုတာ အတိတ်နဲ့ ပစ္စုပန် ဗျာများသွားလို့ထင်ပ။ ကျွန်တော်လည်း လေးစားအားကျရသူ ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ အမှတ်တရ အခုလိုနှုတ်ဆက်တာကိုသိရတာ အားကျ၊ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု
အသီးသီး ပြန် ရောက်လာနိုင်မှာပါ ဆရာ့။
အဖိုးတန်ရတနာများ အမျိုးမှန်စွာနဲ့ အကျိုးအမြန်ပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသား လွတ် မြောက် ရေး ပထမမျိုးဆက်မှာ ပါဝင်လာတဲ့ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာကို ကျွန်တော်တို့ စတုတ္ထ မျိုးဆက် ရဲ.ကိုယ် စား အမ မသက်ဇင် ကဗျာနှင့် ပူ ဇော် ကန်တော့ခြင်းကို ကျွန် တော် တို.နှစ် လို အား ရကြည်နူးလို့ မဆုံးပါ။
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာကို ကဗျာဖြင့် ကန်တော့ ဂုဏ်ပြုထားသည့်-----
အစ်မ မသက်ဇင် ခင်များ---
မရေ... လာလည်တယ်နော်.. အသစ်လည်း တွေ့ဘူးလေ.. ဒါ့ကြောင့် ပြန်သွားတယ်..
စာတွေက ဗဟုသုတတွေ အများကြီးပေးလို့ သိပ်အကျိုးရှိပါတယ်..
လာရောက် ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ဗျာ ..
ပျော်ရွှင်ပါစေ .. :-)
ကဗျာပန်းပွင့်တွေက အရောင်စုံ ၊အနံ့သင်းပြီး
ဆရာလုပ်တာ ၀ါသနာပါလို့။ (အနာဂတ်)မှာ ရေးချ မပါရဘူး။
ဆရာ့ အတွက် ကန်တော့ပန်းလေးက ဆရာမဟုတ်တဲ့ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ထဲကိုတောင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတိုးဝင်ရိုက်ခတ် နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် မဇင် ...
ဆရာ့ အတွက်ဆိုရင်တော့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြနိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူးပေါ့ ...